Download The Wolverine 2013 CAMRIp Mkv [500MB] - အမျိုးကောင်းသား
Home » Movie » Download The Wolverine 2013 CAMRIp Mkv [500MB]
အားလုံးကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ မကြာခင် ရုံတင်မဲ့ကား ဖြစ်တဲ့ The Wolverine ကား တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
ရုံတင်ကားတွေကတော့ CamRip တွေပဲရတာ များပါတယ်.. အားလုံးကို အဆင်မပြေတဲ့ သူတွေ ကောင်ကောင်း ကြည့်ရအောင်လို့ ကောင်းတာလေး ရှာကြံတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
ရုပ်ထွက်ကကောင်းပေမဲ့ အသံကတော့ tube သံနည်းနည်းပါပါတယ်.. ကြည့်ရတာတော့ အဆင်ပြေပါတယ်..
Latest Movies တွေမှ ကြည့်ချင်တဲ့ ကိုကို မမ ဦးဦး ဒေါ်ဒေါ် တွေ အတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
အောက်ပါလင့်မှာ Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်..
Quality: CAMRIp | TS | WEBRIP | DVDRip | Bluray
Size: Runtime: 126min
ဇာတ်လမ်းကတော့ X-Men: The Last Stand ရဲ့အဆက်လို့တောင် ပြောလုို့ရပါတယ်.. Wolverine ဟာ X-Men : The Last Stand အပြီးမှာ သူ့ရဲ့ Super Hero ဘ၀ကို ဇာတ်မြှုပ်ပြီး ကနေဒါက မြို့ငယ်လေးတစ်ခုမှာ ဇာတ်မြှုပ်ပြီး နေတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်...
အဲ့ဒီအချိန်မှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းက သူကယ်ခဲ့တဲ့ Yashida ရဲ့ ဖိတ်ခေါ်ချက်အရ ဂျပန်နုိုင်ငံကို အလည်ရောက်ရှိလာပါတယ်..
သို့သော် Yashida ဟာ သူ့ရန်သူတွေ လက်ချက်ကြောင့် နှလုံးမှာ သံစက်ရုပ် ကပ်ပါးကောင် ထည့်ခံရတဲ့ ဒဏ်ရာနဲ့ သေခါနီး ဖြစ်နေစဉ်မှာ သူ့ မြေးလေးရဲ့ Bodyguard လုပ်ဖို့ တောင်းဆိုချက်က Logan က ပယ်ချခဲ့ ပေမဲ့ သူ့ရဲ့ မြေးလေးဟာ
Yashida ရဲ့ ရန်သူတွေနဲ့ တကယ် ဒုက္ခရောက်လာတဲ့ အချိန်မှာ လိုက်လံ ကာကွယ် တားဆီး ပေးခဲ့ပါတယ်..
ကာကွယ်ရင်းနဲ့ ပဲ Logan ဒဏ်ရာ အကြီး အကျယ်ရခဲ့ ပါတယ်.. ပြီးတော့ Yashida ရဲ့ ရန်သူတွေ Yashida ကို လုပ်ခဲ့ သလို အခု Logan ကြီးလဲ အဲ့လို ဒဏ်ရာ ရနေပါပြီ.. သူသူရင်ကို ခွဲပြီး နှလုံး ထဲမှာ ရှိတဲ့ သံစစ်ရုပ် ကပ်ပါးကောင်ကို ဖယ်ရှား နေပါတယ်..
ထို အချိန်မှာ ပဲ Logan ကို သတ်မဲ့ ရန်သူ ရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်..
Logan ကြီး သူ့နှလုံးနားက သံကပ်ပါးကောင်ကို ဓားနဲ့ ဖောက် ပြီး ဖယ်နိုင်ခဲ့မှာလား ?
ရန်သူကို ရော နိုင်အောင် တိုက်နိုင်ခဲ့မှာလား ?
နောက်ဆုံးမှာ မြေးလေးကိုရော ဘေးလွတ်ရာ ကယ် နိုင် ဦးမှာလား ?
ကိစ္စ သုံးလေးခု တစ်ပြိုင်ထဲ ဖြစ်လာတဲ့ အချိန်မှာ သူ ရအောင် လုပ်နိုင်မလား ဆိုတာ Movie မှာ ကြည့်ရှု ခံစားနိုင်ပါပြီ...
To Download This Movie >> Click Here !
<Don't Forget To Click Skip to Be Continute>
Or Scan Below
[Huge File ကနေ ဒေါင်းရင် အရင် Skip Ad ကျော်ပေးပါ-- ပြီးရင် Webpage ရဲ့ အလည်က Download ဆိုတာကို နှိပ်ပေးပါ--
နောက်တစ်ဆင့်တွင် >> Mobile နဲ့သမားများ Capcha ဖြေပေးပြီး Download ဆိုတာကို နှိပ်ပါ--
ပြီးလျှင် Create Download Link နှိပ်ပြီး Download ရယူနိုင်ပါတယ်--
>> Desktop သမားများ Download နှိပ်ပြီးလျှင် IDM ကနေ တန်းကျလာပါမည်--
အကယ်လို့ မကျလျှင် Capcha ဆက်ဖြေရန်လိုပြီး Create Download Link ကိုနှိပ်ပေးရပါမည်--
Desktop သမားများ Download Now ရယ် Download with ZIp Format နဲ့ ကို မနှိပ်ရပါ Ads များဖြစ်ပါတယ်]
www.ShweMOOvi.com << The Best Film Country For Shwe Myanmar Family.
ပြန်လည်တင်ပြသူ Steel Jelly အချိန် 1:17:00 PM
Mr.Hein Htway Latt August 22, 2013 at 4:24 PM
ဖြစ်နိုင်ရင် တခြား mediafire နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် တင်ပေးစေလိုပါတယ်ဗျာ...
Clean Master (Cleaner) v3.8.0 Apk 5Mb
Candy Crush Saga v1.16.0 Modded Apk Game 49MB
Battery Booster v.6.5 Apk 3MB
TubeMate2Beta v2.0.1 build436 Apk
Username and Password Updated(KEYS 30.8.2013 )
Acceler8 Pro v1.18 Apk Game 29MB
Es File Explorer File Manager v3.0.5.3 Apk 4MB
Facebook v3.6 Build 330188 Apk
Keys 31 August 2013
Windows7Manager v4.3.1 For Win7
Vampires Vs. Zombies Pc Game 253MB
Clean Master v3.7 Apk for Android
Myanmar APN (Beta) for Android
Snap Camera HDR v3.4.8 Apk 5MB
Battery HD Pro v1.3.0 Apk 6MB
Africa 3D Pro Live Wallpaper v1.0 (17MB)
AutoCAD 360 v2.04 Apk 16MB
Clone Camera 2.0.4 for iphone/pod/ipad
V Root v1.6.0 __English version
GPK - APK ဖိုင်တွေကို PC နဲ့အလွယ်တကူအင်စတောလုပ်နည...
MoboMarket v2.1 Apk 3MB
Next Launcher HTC Sense5 Theme v1.5 (14MB)
TubeMate YouTube Downloader v1.05.55 build 336 Ad ...
Photo Collage Max v2.2.2.6 Portable 33MB
BaldBooth v.1.7 Apk (6MB)
Baidu PC Faster For Windows 8/7/Vista/XP 30MB
Super Backup SMS & Contacts v1.7.6 Apk
Skype v4.0.0.22279 Apk
Contra: Evolution v1.1.2 Apk Game 18MB
AppMgr Pro III v3.16 Apk
YouTube Floating HD Player Pro For Android 6MB
Pages Manager v1.5 Apk
Asphalt 8: Airborne v1.0 Apk Game 830MB
Fresh SMS Scheduler v1.0 (493KB)
Next Launcher 3D v1.55 Apk
Bagan Keyboard Pro v1.6.3 Apk
The Smurfs2Movie MP4 (532MB)
Notebooks Pro v4.0 Apk 6MB
ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ် ငွေပါမလာမှုကြောင့် သုံးစွဲသူများ န...
Multiscreen Multitasking THD v13.1 For Android 7MB...
iPhone Screen Locker v1.08 Apk 2.5MB
Brightness Guide 1.1 Portable | 5.2 MB
Advanced SystemCare Pro v6.4.0.289 For Pc
UCam Ultra Camera Pro 4.0.1.081601 Apk 16MB
Video Locker Pro v1.0.4 Premium Apk 2MB
edjing PE - Turntables DJ Mix v1.2.4 Apk 18MB
Wondershare Dr Fone for iOS v3.1.0.111 For Win 8/ ...
TrafficVille 3D v1.0 Mod Unlimited Shopping Andro...
Helmut Scanner For Android 2MB
Strike Fighters Attack v1.0 Mod All Planes Unlocke...
Bagan Keyboard Pro v1.6.0
နာမည်ပြောင်းလဲရေး Apk for Android
Zapya v1.8 Apk 5MB
Moborobo v2.1.3.767 For XP/Vista/7
Shazam Encore v3.14.1Apk 7MB
Smart Compass Pro v2.5.2 Apk
Instagram v4.1.2 Apk
Foxit Mobile PDF v1.7.0.0809 Apk 7MB
Lightning Browser Plus v2.5.0.5 Build 42 Apk
Transparent Screen Pro v2.2 Premium Full Android
ငွေဖြည့်ကတ် အမြန်ထည့်ချင်သူတွေအတွက် EZCharge2Apk...
The Great Gatsby ရုံတင်ကား Bluray အကြည် 720P[1.1G...
TeamViewer v8.0.20202 Enterprise 9MB+ အသုံးပြုနည်း...
Wondershare MobileGo For iOS v3.2.0.9 (21MB)
Myanmar Mobile File Manager for Android v1.0 for A...
Facebook 3.6 Apk
IOS7 Style Weather for iPhone/iPod/Ipad
Username and Password Updated(KEYS 8.8.2013 )
CyberLink YouCam Deluxe 5.0.2931.0 For All Win 344...
Next Browser v1.07 for Android
Bagan Keyboard Pro v1.5.8 Apk
Total Recall v1.3.0 Mod Unlimited Gold And Coins A...
Next Launcher 3D v1.52.1 Apk 7MB
Lightning Browser Plus v2.5.0.4 Apk
Firefox 23 FINAL 15MB
iOS7 Skin Pack v.7.0 2013 (x86/x64) | For Win7(3...